Home Wararka Qorshaha Dheer ee Farmajo ee ku aadan Doorashada iyo Kadib. sii Akhri.
Maxamed Cabdullahii Farmajo oo dhib aan yareyn ku hayey jaalliyadda Somaliyeed ee Baufalo ayaa waxaa si aan ka fiirsi lahayn u soo waday MW hore Shariif Sh Axmed oo isagaba ku cusbaa siyaasadda iyo hogaminta dal, madaxdweynenimo iska dhaafe. MW Shariif Waxaa uu ka dhigay Wasiirka kowaad ee dalka Farmajo oo la ogaa inuu ahaa ruux wax dumiya ee aan wax dhisin, waxayna keentay inuu halkaas ka soo saan qaado dhibka maanta dalka uu ku hayo Farmajo.
Waxaa uu dil u qorsheeyey ninkii saaxadda siyaasadda ku soo daray MW Shariif maadaama uu abaal laawe yahay, waxaa uu dhib iyo dhibaato muddo dheer u baahan si looga soo kabto ku hayaa dalkii magaciisa khadiifad cas loogu fidiyey isagoo ahaa kormeere tiriya basaska baxa iyo kuwa ku soo xarooda hoosada gaadiidka ee Bufalo ee waqooyiga Mareykanka.
Farmajo waxay tiro dad iyo dowlado isku darkooda soddomeeyo ku dhow is qabsadeenafartii sano ee uu hayey hogaanka dalka, waliba dad badan oo Somaliyeed oo uu dhammaantood ka gar darraa.
Somalidu waxay tiraahdaa tiisa daryeelaa tu kale ku dara ninka ay walaashiis qaati ka joogto ayaa Barlamankii Somaliya u dhiibay dhammaan hogaanka dalka oo dhan waasa laga shallaayey. Aynu mid mid u dul istaagno bal wixii dhacay inta aynu ka gaarno:
1• Farmaajo VS Idil Cabdullahi Farmaajo waa gabar walaashiis ah oo goor hore ka digtay in walaalkeed yahay shakhsi xun oo ay Khasab tahay inay Somalida iska ogaato. Gabadhaas oo gudatay xilkii uu dalkeeda ku lahaa waxay si cad ugu sheegtay dadka Somaliyeed ruuxa walaalkeed uu yahay iyo waxa lagala kulmi doono. Idil waxay mudan tahay abaalgud qaran waxayna awoodday wax dad badani aysan awoodin oo ah inay ka gudubtay xeydaabyada qofka beenta ku xakameeya sida ehelnimada iyo qabiilka.
2• Farmaajo VS U.A.E- Dalka Imaaraadka waxay dadka Somaliyeed u qabteen xelliyadii burburka maaha wax la soo koobi karo waxaana tusaale kuugu filan oo kaliya u ogolaanshaha xawaaladaha Somaliyeed oo caalamka oo dhan laga mamnuucay inay xaruumo ka sameystaan halkaas, kadibna ay lacagta sidaas reerkaaga iyo reekeyga nagu soo gaarsiiyaan marka ehelka uu noo soo diro welina waa socotaa. Tababarka Ciidanka, Dhismaha xerrada Gen. Gordon iyo isbitaalkii lacag la’aanta ahaa ee ay walaalahooda Somaliyee u hibeeyeen Farmajo waa dhibeen maadaama ay u kaalmeynayeen dad uusan rabin in loo kaalmeeyo in la dhaco oo la ceejiyo mooyee.
3• Farmaajo VS Sacuudiga Waa dal aynu wax badan ka hello, wax bandanna ay nooga xeran yihiin, hasa yeeshee Farmajo wuxuu ka doortay Qadar iyo Fahad.
4•Farmaajo VS Abdirahman Abdishakur oo askartii sharcigu siiyey ee ilaalineysay kabahooda lagu duugay, kadib markii weerar aan sharci ahayn lagu qaaday gurigiisa.
5• Farmaajo VS Qalbi-dhagax oo aan taariikhda Somaliya ka dhicin in qof Somaliyeed loo dhiibo cadow sidii Falastiini Yuhuud loo dhiibay oo kale ayaa Farmjo uu taariikhda gashaday, waxayna rabay in la dilo si sheekadaba ay halkaas ugu soo xeranto laakiin rabbi dilaa dhiman, Qalbidhagax waa nool yahay.
6• Farmaajo VS Gudomiye Jawaari oo yiri waa inaan hadda bilaabaa hawlaha doorashada, kadibna kursiga si dagal iyo xoog ah looga tuuray, waayo Farmajo ma maqli Karin doorasho ilaa ay ka khasbeen ciidankii Badbaado qaran oo uu indhihiisa uga cabsaday, xataa waxaa la leeyahay intii ay Xamar ku sugnaayeen waxaa ku jiray Taangi qafilan oo uu diiday in la damiyo. Dad badani waxay jeclaayeen in ciidankaas ay Farmajo talada ka wareejiyaan, hasa yeeshee waxay ka doorbideen inaysan xoog adeegsan haddii uu doorasho ogolaaday.
7• Farmaajo VS Shariif Xasan oo uu ciil hore u qabay kaas oo ahaa guddoomiyihii Barlamankii xilka ka qaaday markii loo adkeysan waayey xelligii Kampala Accord, waxaan lagu badalay Lafta gareen oo aad aragteen inuu laba nin oo ooryo walaal yihiin iyo gabar uu adeer u yahay ka soo dhigay xildhibaanada aqalka sare taas oo ah wixii loo keenay, 30 jir maxay aqalka gabar ah maxay aqalka sare ka sheeeysaa isaoo heli karay Prof. Jawaari iyo haween u dhigma.
8• Farmaajo VS Xaaf oo six un xilka uga tuuray si loo keensado Qoorqoor iyo qof qaab lahayn oo aan fahmi Karin inuu yahay hogaan ummad awood dhaqaale iyo mid dadeed leh oo u baahan oo kaliya caddaallad.Waa kan Habeen walba ku haya aabbo Farmajo iwm.
9• Farmaajo VS Axmed Madoobe oo uu damcay inuuba dilo si Kismaayo uu reerkiisa u siiyo oo uu xataa u adeegsaday ciidan shisheeye.
10• Farmaajo VS Siciid Deni oo uu damcay inuu doorashada Puntland xoog iyo lacag uga qaato kadib markii ku soo diray wiilal aan siyaasiyan qaangaarin sida wiilka ina Diyana la yiraahdo.
11• Farmaajo VS Thabit Abdi oo la eryey kadib markii uu run u qaatay waddanimada iyo huuhaada heesaha Farmajo kuna halwgalay balsa eeday, kadib lagu badalay mid aan dhiman ee nooleyn oo hadda dhammaan wixii hanti gobolka lahaa u kala qeybiyey Villada iyo Isagaa oo guryo kaga iibsanaya Turkiga.
12• Farmaajo VS Niclos Haysom UN oo ku eryey hadalkii ahaa “ War Farmajow dadkaaga ha dilin, Baydhabo 15 ayaad si bareer ah ugu dushay xeerar caalami ah ayaa ka yaallo oo waa laguu qabsan qaabtaas goor ay noqotaba”
13• Farmaajo VS Abu Mansoor Rooboow oo weli u xeran kadib markii uu Farmajo u arkay inuu yahay shakhsi ay dadkiisu jecel yihiin, laakiin aysan hiil lahayn oo ay hilbo dayacan iska yihiin, kadibna uu geystay nin aan xataa ku dhalan degaankaas Lafta Gareen.
14• Farmaajo VS Waare oo si khalad lagu keenay isla sidii uu ku yimidna lagu bixiyey ayaa isagana dagaalka ka mid noqday.
Farmaajo VS Ahlu Sunna Dhusamareb oo been looga guuleystay kadib markii heshiis beenaadyo lala galay markii hubka laga wareejiyeyna loo sheegay inay lafahooda u turaan, Galmudug oo intaas uu Shabaab geli waayeyna uu hadda ku daansha daanshoonayo.
15• Farmaajo VS Xasan Sheekh Maxamuud. HSM waxaa loo diiday inuu u geeyo kaalmo uu u waday ummaaddii Somaliyeed ee ay fatahaaduhu ku kharqiyeen gobolka Hiiraan, kadib markii uu gurmad u sameeyey dad badann a ay isaga ku aamineen hantidii ay soo direen, kadibna cirka dayuurad lagula celiyey si dayuuradda uu shidaalka ugu dhammaado cirkana ugu qaraxdo ma sa dhicin oo rabbi sidaas ma rabin. Xasan sheekh waa ninkii isagoo diidi kara ku wareejiyey xilka si dalka uu horay ugu socdo. Xasan wax shkhsi badan yaqaanna halka ay ku socdaan iyo jawaabta wanaagsan ee ka dhalan doonta, waxaanu ka tagay qabyo oo haddii la dhameystiri lahaa maanta dalkeenna uu joogi lahaa meel intaan ka wanaagsan. Laakiin Somalidu, gaar xildhibaanadii dhallainyarada ahaa ma fahmin oo waxaa siray beentii sida sheeko ahaan uu Farmajo ugu sheegay iyo waddaniyaddii lagu dahaaray oo markii cod bixinta ay dhammaatayna laga xayuubiyey dahaarkii. Xasan waxaa la isku dayey in la dilo mar kale bilowgii sannadkaan tiisa oo aan galin darted ayuu haddana ku badbaaday.
16• Farmaajo VS Sheekh Shariif waxaa loo geystay gefaf isa daba joog ah oo uu dil ku jiro laakiin rabbi xaggisa ayuu ka nool yahay, waxaana laga shallaaysiiyey in uu dalka keeno ninkii laga furfuri waayey jaalliyaddii yareyd ee Buffalo oo dartiis u burburtay.Dad badan ayaan weli qaba in ay suuragal tahay in MW shariif uu mar kale ku sirmo Farmajo, laakiin MOL ma qabto waayo wuxuu ogyahay wixii uu soo marsiiyey Farmajo oo naftiisa khater geliyey, eed bandanna loogu haysto MW Shariif keenista uu noo keenay.
17• Farmaajo VS Xasan Khayre. Kheyre waa shakhsi dembiile ah oo wax waliba la wadaagay Farmajo iyo Fahad Khasabna ay tahay Somalida inay ogaato. Kheyre waa ninkii Farmajo intaas oo dhibaato ah u fuliyey, Farmajo iyo Fahad amarka ayey lahaayeen hawl fulinta haddey tahay dil, hadday tahay dhaawac, hadday tahay dhac, haddey xarig, haddey tahay afduub iyo haddey muwadin u dhiibid cadow waxaa dhammaantood fuliyey Xasan Kheyre, waana khald weyn inuu dembigaas kaga baxsado inuu Hawiye yahay. Farmajo, Fahad iyo Xasan Kheyre waa isku dembi waana in hal goob looga wada gudaa dhammaan gabood falladii ay geysteen. Kheyre waxaa loo eryey markii lagu heshiin waayey qaabkii wax la isula sameysan lahaa iyo wixii la haylleynayey qaabka loo halleynayo oo uu meelaha qaar wax ka xaday.
Su’aalaha dheegahay ay baryayaan jawaaantooda waxaa ka mid Kheyre Muxuu isu casili waayey:
Waqtigii cadowga soo jireenka ah loo dhiibayey muwadin halgamaa ah Qalbidhagax?
waqtigii Cabdiraxman Cabdishakuur la weerayey ee dhallinyarada ciidanka ah kabahooda lagu duugayey?
Cali Cabdullahi Cosoble iyo Xaaf la ridayey?
Axmed Madoobe dilka loo qorsheynayey si kursiga looga qaado?
Baydhabo dadka lagu laynayey?
Madaxweynayaashii hore cirka la rabay in lagu qarxiyo iyo waxyaabo kale oo badan oo soo bixi doona. Xasan kheyre waa uu rabay inuu la sii joogo kooxda uu dembiyada la guraneyey ee iyaga ayaa iska nacay oo bannaanka dhigay iyagoo is leh waxaa loo qabsan doonaa dhamaan dembiyadii aad wada gasheen, laakiin waxay la yaabeen markii ay arkeen inuu Hawiyenimadii shalay uu codowga u ahaa oo uu kooxda la rifayey uu maanta ku qaraabanyo, kuna baxsan rabo. Kheyre hadduu caqli leeyahay doorashada ka hor dalka haka cararo haddii kale godkiisa ayaa biyo ugu soo gali doonaan. Mol waxay qabtaa inuusan Murashax ahayn ee uu mugdi isku qaris ka wado, kadibna uu iska carari doono.
Farmajo cid kasta oo dan qaran kala hadashaa waa is deynayeen waxayna ku signed inuu marka ay ay albaabka soo baxdo ay xabad ku fakato, carada uu u qaado darted.
Haddaba waa maxay qorshahiisa doorashada iyo Kadiba?
Waa laba oo aan mid sedexaad lahayn:
In uu doorasho gacan ku rimis ah ku guuleysto si dad uu u yiraahdo shacbiga ayaa I raba dalkana colaad uga dhacdo kadibna uu u yiraahdo waan guuleystay laakiin waxaa ila dagaalay kooxo xukun raba oo dalka iga eryey, si uu dagaalka u sii huriyana uu yiraahdo Hawiyaha Xamar ayaa ila dagaalay oo waxay diidayaan madaxweyne Daarood oo kursiga laba jeer ku soo noqday.
Inuu Sameeyo si degdeg ah isla marka uu kula soo noqdo talada , Gedo State oo uu dhowr magaalo ka soo jaro Bay iyo Bakool kadibna uu halkaas dego sidii Maxamed Siyaad u degay Gedo.
Farmajo waxaa ka go’aan inaysan doorashadaan noqon mid lagu heshiiyo mar waliba, kumana sii jirto haddiiba ay u muuqato inay si caddaalad ah u dhacdo oo uu arko inay guusha cadaaladda raaceyso, qof kalana uu u muuqdo inuu ku soo baxayo doorasho.
Somaliyey, gaar ahaan xildhibaanada Cusubow Farmajo waa kaas ee rabbi uga cabsada in aad dalkaan gelisaan khater intaan ka sii weyn, Farmajo ma soo noqon karo, si kasata oo uu ku soo noqdana waxaa halis loo yahay dagaal. Dalkana uu Gacanta u geliyo Itoobiya, waa haddeyba sii jirtee.